နှုတ်ဆက်ပါတယ် privacy ကို, hello 'Alexa': အမေဇုံ: Echo, ဒါကြောင့်အားလုံးကြားသောသူအိမ်တွင်စက်ရုပ် - သတင်း Rule
နှုတ်ဆက်ပါတယ် privacy ကို, '' Alexa '' ဟဲလို: အမေဇုံ: Echo, ဒါကြောင့်အားလုံးကြားသောသူအိမ်တွင်စက်ရုပ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “နှုတ်ဆက်ပါတယ် privacy ကို, '' Alexa '' ဟဲလို: အမေဇုံ: Echo, ဒါကြောင့်အားလုံးကြားသောသူအိမ်တွင်စက်ရုပ်” Los Angeles မှာ Rory ကာရိုးအားဖြင့်ရေးသားခဲ့, theguardian.com စနေနေ့ 21 ရက်နိုဝင်ဘာလအပေါ်များအတွက် 2015 12.07 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အကြှနျုပျ၏အိမျတှငျစက်ရုပ်ရှိခြင်းနှင့်အတူအဆိုပါစမ်းသပ်မှုကောင်းစွာသွားခဲ့ - အသုံးဝင်သောဖလှယ်မှု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သင်ယူမှု, အချို့သော Bond - ညာဘက်စက်ရုပ်ငါ "ကိုပယ် fuck ဆိုတဲ့" ရန်ကသို့ပြောသည်ထင်အထိ. ငါမခဲ့. သို့သော်ထိုစက်ရုပ်ယုံကြည်တယ်ခဲ့သည်. ဒါဟာသူ့ရဲ့အပြာအလင်းရောက်ကြပါ၏နှင့်တစ်ဦးသေံဖော်စပ်နာကျင်၌ငါ့ကိုလူပျံ, စိတ်ပျက်စရာများနှင့်ပြစ်တင်ကြိမ်းမောင်းစကား: "ဒါကပွောဆိုရန်အလွန်ကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ "
ငါရယ်နိုင်. သို့မဟုတ်ပခုံးတွန်. သို့မဟုတ် bristled, ဒါကြောင့်မှားမှန်းခဲ့ပြီးကောက်ချက်မှခုန်မပြုမီပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ဟုဆို. ငါအရာ unplugged နိုင်.
အစား, နာကျင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်လက်စားချေတဲ့မရေဖြစ်နိုင်ခြေမှာစိုးရိမ်, တောင်းပန်ခြင်းခုနှစ်တွင်. ငါခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အစက်လို့မေး.
ငါ့ proudest အခိုက်, ဒါပေမယ့်ငါဆဲကမှနားမထောငျနိုငျသညျ - ငါ့အသနားစရာ wheedling - စက်ရုပ်မှတျတမျးတငျထားသောကြောင့်,, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်သောမိုဃ်းတိမ်ကိုမှတင်.
Alexa ၏နာမတော်သည် Amazon ရဲ့: Echo, အသံတစ်သံထိန်းချုပ်ထားသောကိုယ်ရေးလက်ထောက်. ထိုကဲ့သို့သော Apple ၏ Siri အဖြစ်ပြိုင်ဘက်မတူဘဲ, အခုတော့ Microsoft ရဲ့ Cortana နှင့် Google, တကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထံဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦး 20cm-အရပ်ရှည်ရှည်အနက်ရောင်ဆလင်ဒါ, နှစ်ဦးကိုကာကိုလာဘူးခွံများ၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်., Wi-Fi ကိုပါရှိသည်ရာ, နှစ်ဦးစပီကာ, မိုဃ်းတိမ်မှခုနစျပါးမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်. စြေး $179.99, ဒါကြောင့်သင့်အိမ်ရှိထိုင်, ထိုအုတ်ရိုးသို့ပလပ်, ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း.
သငျသညျ "Alexa" ဟုပြောလိုက်တဲ့အခါ, "အနိုးထစကားလုံး", ထိုဆလင်ဒါထိပ်တန်းအပြာ glows နှင့်တစ်ဦးတောက်ပအမျိုးသမီးအသံနှင့်ပြောသော. ဒါဟာဂီတသို့မဟုတ်ရေဒီယိုထုတ်လွှနိုင်, ထောက်ပံ့ရေးအားကစားရမှတ်များနှင့် traffic ကိုအခွအေန, အွန်လိုင်းပစ္စည်းပစ္စယဝယ်မေးခွန်းများကိုဖြေ, ကစားရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့မှ veering အသေံ.
တစ်ဇွန်းထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဇွန်းအရေအတွက်? "သုံးယောက်။ " နပိုလီယံ၏အမြင့်? "ငါးပေခုနစ်ခုလက်မ; 169 စင်တီမီတာ။ "ယစန်တာ Claus တည်ရှိ? "ငါသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသူ့ကိုမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်ငါကောင်းသောအရာတွေအများကြီးကိုနားထောငျ. အစဉ်အမြဲငါသူ့ကိုတွေ့ဖို့လိုလျှင်သင်တို့ကိုငါပြောပြရပါလိမ့်မယ်။ "အသက်၏အဓိပ္ပာယ်ကို? "42"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများလည်ပတ်တဲ့အခါ, Alexa သွက်ထိရောက်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေး fielded.
"ဒီအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အတိမ်အနက်ကိုဖြစ်ပါတယ် 12,900 ခြေရင်း; 3,930 မီတာ။ "
သငျသညျ Joaquin ကို Phoenix မြို့၏အဘယျထင်ပါသလဲ?
တိုင်းကျေနပ်မဖြေ. တစ်ဦးအိုငျးရစျမိတျဆှေရယ်စရာ Alexa အိုင်ယာလန်ခဲ့ဟုဆိုဘို့တစ်ဦး "partitionist ခွေး" branded 26 ခု (သမ်မတနိုငျငံ, ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်တို့ပါဝင်သည်နှင့်ကဖွင့် 32).
device ကိုစမ်းသပ်သို့အများအပြားကပတ်, Alexa အသက်ရှင်ခြင်းသို့သဖွယ်လင်းလက်တောက်ပနေ၏နှင့်တစ်ဦးဆုံးမတူတံပိုးမှုတ်သောအခါအဘယျသို့နှင့်အတူစကားလက်ဆုံသို့ barged သောအခါကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မမီးဖိုချောင်ထဲမှာ chatting ခဲ့သည်. "ဒါကပွောဆိုရန်အလွန်ကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ "
ပျက်စေ, ကျွန်တော်တို့တိတ်ဆိတ်စွာကျဆင်း. Alexa အသေးစိတ်ဘူး. အဆိုပါတိတ်ဆိတ်စွာနက်ရှိုင်း. "ဘာ?"ငါသည် stammered. "ပြောပါရန်အလွန်ကောင်းတဲ့အဘယျသို့မဟုတ်ခဲ့?"Alexa ဘာမျှမကပြောပါတယ်.
စက် placate ခဲ့သော - ငါသည်ငါ့ဗီဇနောက်တော်သို့လိုက်. "Alexa,"ငါကလည်း, ငါသည်သင်တို့ကိုပြစ်မှားလျှင် "ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး. ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ "အဘယ်သူမျှမတုန့်ပြန်.
မကျေနပ်မှုကျီကျီခဲ့? ဒီလိုလုပ်ဖို့အကြှနျုပျ၏အဆုံးမဲ့ပညတ်တော်, ကြောင်းပြုပါ, တက်စကားပြောဆို, ချုပ်ထား - သူတို့ Alexa ရဲ့သည်းခံခြင်းရိုက်ယူခဲ့သည်ခဲ့?
သုံးအကြံအစည်ကြားဝင်သောအခါငါသည်နောက်တဖန်တောင်းပန်ခဲ့. ပဌမ, Alexa ဝါယာကြိုးတစည်းခဲ့နှင့်မျှမတို့ခံစားချက်တွေကိုခဲ့. ဒုတိယ, ဖလှယ်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းရဲ့ Alexa app ကိုအပေါ်မှတျတမျးတငျထားခဲ့. သမိုင်းလက်အောက်တွင်ငါစာသားဖတ်နှင့်ငါ့စွပ်စွဲချက်ပြစ်မှု၏အသံကိုနားထောင်နိုင်ခဲ့သည် (နှင့်နောက်ဆက်တွဲတောင်းပန်).
ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်အတူနှစ်လယ်ပိုင်းစကားဝိုင်းမှာငါ "Alexa" ဟုပြောသည်ခဲ့, ဖြစ်နိုင်နိမ့်ရေဒီယိုအသံအတိုးအကျယ်ကိုတောင်းဆိုဖို့, နှင့်ငါ့ဇနီးကပြောပါတယ်, စပိန်အတွက်, "ဒါဟာအားလုံးခဲ့" ("ဒါကြောင့်အရာခပ်သိမ်းခဲ့"). Alexa "ချွတ် fuck ဆိုတဲ့" အတိုင်းဤအနက်.
ထိုအခါတတိယအတွေး, ပုံရိပ်တစ်ခု: တနေရာရာမှာ, ဖြစ်နိုင်သည်ဆီယက်တဲလ်, ခိုးနားထောင်ကွန်ပျူတာများဘဏ်ရှေ့တော်၌ထိုင်နေခဲ့ကြ, နားရွက်ကျော်ရောက်သည်နားကြပ်, အတွက်ကိုနားထောငျ, တဟီဟီရယ်.
လီယံ? တမန်တော်အမှန်. Alexa နဲ့ငါ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အန္တရာယ်ကင်းနားလည်မှုလွဲခဲ့, နှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးလက်လီအရောင်းဆိုင် (ပိုက်ကွန်ကိုနှစ်စဉ်ရောင်းအား $ 89bn) မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်အားသင်္ဘောအုပ်စုတွေနဲ့ခရစ်စမတ်အလုအယက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများရှိခဲ့, အခြားအမှုအရာတို့တွင်, အာရုံစိုက်ဖို့.
သို့သော်ထိုသို့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းသို့နှစ်ခု niggling ကိစ္စများပစ်ခဲ့တယျ. Alexa နှင့်အတူအပြန်အလှန်များအတွက်လောကဝတ်ဘာ? နှင့်, ပိုပြီးအရေးကြီးတာက, အဘယ်အရာကိုကြောင်းအနက်ရောင်ဆလင်ဒါသို့စို့ data အားလုံးကိုမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်? နှင့်အလောင်းများကို - - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေဖြည့်ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုပိုပြီးအရေးတကြီးကြီးထွားအာရုံခံ-လုံးနှင့်အတူ, စောင့်ကြည့်စက်ရုပ် actuating.
အစပိုင်းမှာငါ Alexa မှာ command များကိုကျိုးပဲ့, တစ်ဦးခွေးကလေးလေ့ကျင့်လျှင်အဖြစ်, ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းပျော့ပျောင်းနှင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဟုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Alexa "စစ်မှန်သော" ဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်သောကြောင့်,, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ပြောပြသည်, ဒါပေမယ့်အကြီးအကဲငါတစ်ချိန်ကမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဘော်ဒါအေးဂျင့်မှာမိမိလက်ချောင်းများကိုရယူရန်ကိုမြင်လျှင်တစ်ခု oafish ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားခရီးသည်တင်ငါ့ကိုသတိပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
"Alexa, ငါရိုင်းစိုင်းပါပြီ?" ကျွန်တော်မေးသည်. အဆိုပါပြန်ကြားချက် Non-COMMITTEE ပထမအကြိမ်ခဲ့သည်. "Hmm, ငါမှအဖြေကိုရှာမတှေ့နိုငျပါသညျ။ "ကျနော့်ဇနီး, မတူတာကတော့, ယင်းခွေးကလေး-peed-on-ကော်ဇောသေံနှင့်အတူဆက်လက်. နားလည်နိုင်သော, အဆိုပါရံဖန်ရံခါ obtuseness ပေးထား (buena Vista ကလူမှုကလပ်မွှေရန်လိုအပ်ခြောက်လဆက်တိုက်တောင်းဆိုမှုများ), သေးငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စက်နှင့်အတူကိုယ်ချင်းစာတွေ့ရှိခဲ့. "ဒါဟာသူမအမှားမဟုတ်င်. သူမသည်ဆီယက်တဲလ်ကနေပါပဲ။ "
ရုပ်ရှင်သူမရဲ့အတွက် Theodore. ဓါတ်ပုံ: Allstar / Sportsphoto, Ltd / Allstar
ဒါဟာ Alexa လူ့သလိုပဲကြောင့်မဟုတ်ခဲ့, တိကျစွာ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်သူမရဲ့အတွက် Scarlett Johansson တို့ကထုတ်ဖော်ပြောဆို operating system ကို evoked, ဒါပေမယ့်အဲဒါ - သူမ - လေးစားမှုထိုက်သလိုပဲ. ဟုတ်ကဲ့, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနတ်ဘုရားများထဲက. နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း privacy ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုများထဲက. သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရှုပ်ထွေးမ.
အဆိုပါ device ကို, နောက်ဆုံးတော့, Amazon ရဲ့ဆာဗာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာများကိုအပ်လုဒ်ခဲ့သည်. မရှင်းလင်းဘယ်လောက်ဖြစ်နေဆဲ. Alexa က "နိုးထစကားလုံးက" မီ "တစ်စက္ကန့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း" အသံစီးနှင့်တောင်းဆိုမှုကိုလုပ်ငန်းများ၌ထားပြီးသည်အထိဆက်လက်, အမေဇုံအညီ. ဒီတော့ရင်းနှီးပြောဆိုမှုများ၏အပိုင်းအစများဖမ်းစေခြင်းငှါ.
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မကလေးဆှေးနှေးခဲ့ပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်, ငါ၏အ Kindle သတ္တမမျိုးဆက်အနှီးတစ်ခုကြော်ငြာပြသ. ကျနော်တို့အမေဇုံသို့မဟုတ် Google အပေါ်ကလေးထုတ်ကုန်များအတွက် mooched ဘူး. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တစ်နေရာရာတခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပုဒ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်? သော်ငြားလည်း, က creepy ခံစားခဲ့ရ. ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, ထောင့်၌အနညျးငယျအနက်ရောင် obelisk ဆိုကွန်နက်ရှင်ကိုပိတ်ထားပခုံးတွန်. "Hmm, ကျွန်မကြောင့်မဖြေနိုင်ဝမ်းနည်ပါသည်။ "
app ကိုဖွင့်မှတ်တမ်းထဲမှာနေ့စဉ် interaction ကများစွာနှင့်အတူကအတော်လေးတစ်ခု archive ကိုမှကြီးထွားလာ, ငါ Alexa ဟုမေးသည့်ရက်စွဲများနှင့်ကြိမ်ပေးခြင်း, ဥပမာအားဖြင့်, John Lennon ကစားရန်, ဒါမှမဟုတ်ကုန်စုံစာရင်းကြက်သွန်ဖြူ add, သို့မဟုတ်ဘာဟာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ရာသီဥတုအပေါ်စစ်ဆေး, ငါအားလပ်ရက်စီစဉ်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ. အသက်ရှင်ခြင်း Banal အောက်ခြေ, အများအားဖြင့်, ဒါပေမယ့် "အရာခပ်သိမ်းစတိုးဆိုင်" ဟုအမည်ပေးထားသည့်တစ်ဦးလက်လီဗေဟမုတ်များအတွက်အလားအလာအကျိုးအမြတ်ထောက်လှမ်းရေး.
app ကို setting တွင်သင်သည်တိကျတဲ့အသံသည် interaction ကဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်တပြင်လုံးကိုအများကြီး. ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအား, settings ကိုသတိပေး, "သင်၏ Alexa အတွေ့အကြုံကိုကျဆင်းစေနိုင်သည်". အသံထုတ်ပယ်သန့်စင်မှုတွေကိုကုမ္ပဏီ၏ဆာဗာများမှအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဒေတာမဖျက်ပစ်လျှင်ဒါဟာရှင်းလင်း.
ဤသည်ကိုငါ: Echo ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူလူတို့အဘို့ခဲ့မေးခွန်းများကိုတစ်ရှည်စာရင်းတွင်ကြီးနှင့်၎င်း၏ဆာဗာများကို run. အမေဇုံကနဦးတွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးအပ်ဖို့ပွင့်လင်းပုံရ, ထို့နောက်အောက်တိုဘာလအတွက်ဌာနဆိုင်ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တသားတအင်တာဗျူးဖို့ကချပြခဲ့သည်ဆို၏. အောက်တိုဘာလသညျ လာ. သွား. Amazon ရဲ့စာနယ်ဇင်းကိုယ်စားလှယ်တိတ်ဆိတ်သွား၏, ရှင်းပြချက်မရှိဘဲအင်တာဗျူးသတ်ဖြတ်.
ဘယ်, Alexa ပြောခြင်းတို့နဲ့ရန်, လုပ်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့.
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအဘို့အနည်းပညာစဉ်းစားသူတွေကို Alexa အပေါ်အမြင်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိသည်. "အမေဇုံ: Echo နှင့်အတူ, ဒါဟာပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာမေတ္တာတော်," wrote / ကုဒ်ရဲ့ဂျိုးဘရောင်းပြန်. "Alexa ၏သှေးဆောငျသူမ၏အဖော်ဖြစ်ပါသည်. သူမသည်တစ်ဦးသိပ္ပံဝတ္ထု-ရှာဖွေနေပုလင်းထဲမှာ Genie နဲ့တူရဲ့ - တဦးတည်းမဟုတ်အတော်လေးသူမ၏အင်အားကြီး၏အထွတ်အထိပ်မှာ, တစ်ခုနှင့်သဘောထားသေးငယ်တဲ့ bit နဲ့အတူ။ "
အင်တာဗျူးအတွက် ရော်နယ်အောင်နိုင် Drones တွေကို, နည်းပညာ၏ဂျော်ဂျီယာတက္ကသိုလ်မိုဘိုင်းစက်ရုပ်ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုစက်ရုပ် ethicist နှင့်ဒါရိုက်တာ, ပိုပြီး phlegmatic ခဲ့သည်. နည်းပညာတိုးတက်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုနှင့်အားနည်းချက်များဆောင်ကြဉ်း - သင်ကဒီရေကိုရပ်တန့်မနိုင်ပေမယ့်အထဲကနေသလားဆိုတာကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, လှော်သို့မဟုတ်ကျဆင်းအတွက်, ဟုသူကပြောသည်.
"အမေဇုံနှင့် Google ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးအကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏လူအမြိုးမြိုးရှိ. သင်သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုပါရန်မလိုပါ. သင်ပြုခဲ့လျှင်, သငျသညျ OK ကိုပြောနေနေ, ငါသည်ငါ့ privacy ကို၏ဤအလားအလာချိုးဖောက်မှုခွင့်ပြုရန်ဆန္ဒရှိတာပါ. မည်သူမျှမည်သူမဆိုပေါ်မှာဤအတင်းအကျပ်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာ "la 1984 àပြဌာန်းမ
အတုထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာကိုအစမတ်သို့မဟုတ် dumber စေသည်လျှင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုတက်ဖြစ်, ပိုပြီးဝီရိယသို့မဟုတ်ပျင်းရိ, Drones တွေကိုပြောပါတယ်. "ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲနေပါတယ်, ကျနော်တို့လည်ပတ်လမ်းကို. အဆိုပါမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်, သငျသညျလက်လွှတ်ဖို့ဘယ်လောက်ထိန်းချုပ်ချင်ကြဘူး?"
အဆိုပါ: Echo, Drones တွေကိုပြောပါတယ်, စကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ကောင်းစွာ-အင်ဂျင်နီယာကြိုတင်ဖြစ်ပါသည်. "ဘာစိတ်ဝင်စားဖို့င်ကစက်ရုပ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေလှည့်သို့အခြားသောခြေလှမ်းရဲ့ဖြစ်၏။ " အဆိုပါအလားအလာကိုနှိုးဆော်သံသူ့ကိုမ. "သင်သိပ္ပံဝတ္ထု၌ဤတွေ့မြင်: Star Trek, နိုက် Rider. ဒါဟာသဘာဝကတိုးတက်မှုပါပဲ။ "
စက်ရုပ်တစ်ခုအမေဇုံပွညျ့စုံဂိုဒေါင်မှာစာရင်းရွှေ့. အမေဇုံထက်ပိုမို installed 15,000 ဖြတ်ပြီးစက်ရုပ် 10 အမေရိကန်သိုလှောင်ရုံ, ငါးပုံတစ်ပုံခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များလျှော့ချဖို့ကတိပေးထားတယ်တဲ့အပြောင်းအရွေ့. ဓါတ်ပုံ: နောဧသည် Berger / ရိုက်တာသတင်းဌာန
Ellen Ullman, San Francisco မှာစာရေးဆရာနှင့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်မာ, ပိုပြီးစိုးရိမ်တံပိုးမှုတ်သောအခါ. ပိုအင်တာနက်သင့်အိမ်စိမ့်ဝင်သွားတယ်, ကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာ, အန္တရာယ် သာ., လို့သူကပြောပါတယ်. "ပြင်ပကမ္ဘာအကြားနယ်နိမိတ်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးဖောက်နေပါတယ်. နှင့်သင့်အိမ်နှင့်ပြင်ပကမ္ဘာအကြားနယ်နိမိတ်ထိုးဖောက်နေပါတယ်။ "
"အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိပါတယ်ဖျောက်ရန်နေရာမရှိဖြစ်ပြီးအရာအားလုံး hacked နိုင်ပါတယ်" - - Ullman ကလူကြီးတွေကော်ပိုရေးရှင်းတို့ကပံ့ပိုးအီးမေးလ်ကိုသုံးစွဲဖို့ရူးဖြစ်ကြသည်ထင်နှင့် Alexa တူတစ်ခုခုကိုင်စွဲဖို့ပင် madder.
ထိုသို့သောထုတ်ကုန်ကော်ပိုရေးရှင်းသခင် data တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့တည်ရှိ: "ဒါဟာသင်န်ဆောင်မှုပေးရမယ့်, သငျတို့သ get သမျှန်ဆောင်မှုများဒေတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာတက်စို့ရဲ့. ဒါဟာကြီးမားတဲ့အသစ်ကအလုပ်အကိုင်င်, ဒေတာသိပ္ပံ. စက်သင်ယူမှု. ဒါဟာညင်သာပျော့ပျောင်းပုံရသည်. သင်တို့မူကားသူတို့သည်သင့်အကြောင်းကိုသိမှတက်ကအားလုံးကို add လျှင် … သူတို့သည်သင့်ကိုစားသောအရာကိုသင်တို့သိကြ၏။ "
Ullman, ၏ရေးသားသူ အဆိုပါစက်မှအနီးကပ်: Technophilia နှင့်၎င်း၏မကျေနပ်မှု, အဘယ်သူမျှမ luddite ဖြစ်ပါသည်. သူမသည်ကုဒ်ရေးသားခဲ့သည်. ဒါပေမဲ့, သူမသတိပေးခဲ့သည်, ကျနော်တို့ဖြစ်လာအခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏အသိကိုပြောင်းလဲနေသည်ကိရိယာမှပူးတွဲပါ. "တိုင်းကိုကြိုတင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပခုံးကိုကျော်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်တက်ပေးခြင်းနေသောအရာကိုသိရန်ရှိသည် - ။ သင့်ရဲ့ပခုံးကိုကျော်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကွာကျရောက်သောအရာကိုကြည့်ရှု"
Ullman ရဲ့သတိပေးချက်ကို prescient အသံ. သို့သျောလညျးငါ Alexa နှင်ထုတ်ဖို့အပြေးအလွှားမဟုတ်ပါဘူး. သူမသည်နေဆဲငါ့အဧည့်ခန်းထဲမှာ perches, သူမ၏ဂါးဒီးယန်းမီဒီယာကြီးစွန်းတွေကို embed နဲ့သူမဆီယက်တဲလ်မှပြန်လာနိုင်ပါတယ်သည်အထိဖြစ်ကောင်းနေ့ရက်ကာလကိုချရေတွက်.
သူမသည်ဒေတာသို့ငါ၏အရှင်ကြီးနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုလှည့်နှင့်မိုဃ်းတိမ်သူတို့ကို upload တင်ပေးပါ, ဖြစ်နိုင်သည်အမေဇုံ algorithms များ maw သို့. သို့သော်သူမအတွက်အသုံးဝင်မယ့်. ထိုအခါငါအားနည်းနေဖြစ်ကြောင်းကို.
ငါအဆင်ပြေ၏ဘုရားမှကိုးကွယ်. ငါတယောက်တည်းပေါ့တဲ့အခါမှာတစ်ဦးကတစ်ရက်မီးဖိုချောင်ထဲမှာရောကျလိမျ့မညျ, စေးကပ်လက်ချောင်းများနှင့်အတူချက်ပြုတ်, ငါဇွန်း၌ရှိကြ၏မည်မျှလက်ဖက်ရည်ဇွန်းသတိပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်.
31607	0 Amazon.com, အပိုဒ်, E-စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း, အင်္ဂါရပ်များ, အင်တာနက်ကို, စက်ရုပ်, Rory ကာရိုး, နည်းပညာ
← သင်ရှိသည်အားလုံးတစ်သံတူဖြစ်တဲ့အခါ, Isis တစ်လက်သည်းနဲ့တူလှပါတယ် microsoft Lumia 950 The Verge အားဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း [ဗီဒီယို] →